Shina miloko plastika fluorocarbon aluminium miloko sy mpamatsy | Jixiang
Ny famirapiratry ny tontolon'ny plastika aluminium-flolorocarbon miloko (chameleon) dia avy amin'ny endrika voajanahary sy marefo izay namboarina. Nomena anarana izy noho ny lokony miovaova. Ny velaran'ny vokatra dia afaka maneho karazana perla tsara tarehy sy maro loko amin'ny fiovan'ny loharano sy ny zoro fijery. Izy io dia mety indrindra ho an'ny haingo anatiny sy ivelany, rojo ara-barotra, doka fampirantiana, fivarotana fiara 4S fiara ary haingon-trano hafa ary aseho amin'ny toerana ampahibemaso.
Ny sosona ambonin'ilay takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika misy plastika ＞ 70% dia mitentina materials 70% fluorocarbon ho fitaovana fototra ary manampy an'i Pearlescent Mica sy fitaovana vaovao hafa. Izy io dia manana loko marevaka sy malefaka toy ny vy. Izy io dia mampiasa tanteraka ny fifandraisan'ny taratra, ny fihenan-tsolika, ny diffraction ary ny fitrohana ny hazavana sy ny fitaovana mba hamoronana loko mahafinaritra ny natiora, mba hamolavolana ny fahatsapana hatsarana hita maso eny ambonin'ny.
1. Ny lokon'ny loko dia miova amin'ny fiovan'ny loharano hazavana sy ny zoro fijerena;
2. Gloss ambony, mihoatra ny 85%;
Izy io dia mety amin'ny ravaky ny trano sy ivelany ny toerana ho an'ny daholobe, rojom-barotra, dokambarotra fampirantiana, fivarotana fiara 4S, sns.
Previous: Nano manadio tena lovia plastika aluminium